अमेरिकामा भोकै मर्न लागेको भन्दै भिडियोमा रुने युवकको भनाई झुटो, यस्तो छ बास्तबिकता…. - Alert Khabar
Homeविश्वअमेरिकामा भोकै मर्न लागेको भन्दै भिडियोमा रुने युवकको भनाई झुटो, यस्तो छ बास्तबिकता….
अमेरिकामा भोकै मर्न लागेको भन्दै भिडियोमा रुने युवकको भनाई झुटो, यस्तो छ बास्तबिकता….
काठमान्डौ ,अमेरिकामा भोकै मर्न लागेको भन्दै भिडियोमा रुने युवकको भनाई झुटो रहेको पाइएको छ। अमेरिकाबाट प्रकाशित खसोखासका अनुसार ति युवकले बोलेका धेरै कुरा झुटो रहेको प्रमाणित भएको हो ।सामाजिक संजालमा देखिएका युवा भर्जिनियामा हास्य कलाकार पुष्कर पन्तको घरमा भाडामा बस्दै आएका पवन चापागाइ नामका व्यक्ति हुन् ।उनी विगत २२ महिनादेखि फेयरफ्याक्स अन्नाडेलमा पन्तको घरमा भाडामा बस्दै आएका छन् । उनी अहिले पनि पन्तका घरमा बस्दै आएका छन् ।
उनले भर्जिनियाको बर्कमा रहेको सेभेन इलाभेन स्टोरमा काम गर्दै आएका छन् ।‘हिजो राती ८ बजे कामबाट आएका थिए । दाई नमस्ते भनेर मसँग कुराकानी पनि गरे । खाना खाएर सुतेपछि आज विहान ५ बजे उठेर फेरी काममा गएका छन् ।’ उनका घरबेटी पन्तको भनाइ उदृत गर्दै खासोखासले लेखेको छ ।खसोखासका अनुसार सेभेन इलाभेन स्टोरमा काम गरिरहेका उनलाई भर्जिनिया निवासी पुरु सुवेदीले कामगर्ने स्थानमा नै गएर भेटेका छन ।न यी युवा भोकै छन्, न काम गुमाएका छन्, न घरबाट निकालिएका छन् ।
भिडियोमा ती युवाले बताएका अधिकांश कुराहरु गलत छन् । भिडियोमा उनले बजारमा कुनै पनि खानेकुरा नभएको भएपनि खानै नहुने, ष’डेगलेको र वि’षादी भएको कुरा बेच्न राखेको बताएका छन् । जुन शतप्रतिशत गलत रहेको छ । अमेरिकाको खाद्य एवं औ’षधी प्र’शासनले कुनै पनि खानै नहुने र विषादीयुक्त खानाहरु बेच्न प्र’तिबन्ध लगाएको छ । जनताको स्वास्थ्यमा असर गर्ने, वि’षादी भएका खानेकुराहरु कसैले बेचेमा उनीहरुलाई का’रवाही हुन्छ र कतै संक्रमित भएका वा ग’लत तरिकाले ले’वल लगाइएका खाद्यसामाग्री बजारबाट फि’र्ता लगिन्छ ।
त्यस्तै अमेरिकामा राष्ट्रब्यापी रुपमा खाद्य सामाग्रीको अ’भाव भएको छैन । ग्रो’सरी स्टोरदेखि डे’लिभरी गर्ने रेष्टुरेण्टसम्म अत्यावश्यक बिजनेशका रुपमा खुला रहेका छन् । को’रोनाको म’हामारीको सुरुका दिनमा केही स्टोरहरुमा सामान सप्लाई कम भएको थियो ।तर अहिले खाद्य सामाग्री अ’भाव भएको छैन । ती युवाले दावी गरेजस्तो भर्जिनियामा त्यस्तो स’मस्या कतैपनि छैन । अमेरिकामा विभिन्न सिटीले निशुल्क खानाको व्यवस्था पनि गरेका छन् । कतिपय स्थानमा विभिन्न गै’रनाफामुलक सं’स्थाहरुले पनि यस्तो व्यवस्था गरेका छन् ।
ती युवाले आफूलाई फे’लोनी २ लागेकाले काम नपाएको बताएका छन् । तर आफूसँग नयाँ गाडी, बैंक एकाउन्ट, मोबाइल फोन र क्रेडिट कार्डहरु भएको बताएका छन् । जुन वि’रोधाभाषपूर्ण रहेको छ । यस्तो अ’पराध गरेको व्यक्तिलाई आ’जिवन जे’ल वा कम्तीमा २० बर्ष जे’ल र १ लाख डलरसम्म ज’रिवानाको व्यवस्था हुन्छ ।उनको मु’द्दा चलिरहेको बताइएपनि फे’लोनी २ भए नभएको स्पष्ट छैन । उनीसँगै बस्ने मान्छेले के’स हालेको जनाइएको छ ।अमेरिकामा दशौं लाख का’गजपत्रविहिन रहेका छन् । कागज पत्रवि’हिनहरुले समेत काम गरिरहेको अवस्थामा अरुले कामै नपाउने भन्ने कुरा झू’ठो हो ।
कर्पोरेट र सरकारी बाहेकका अधिकांश काममा व्यक्तिको अ’पराधको पृष्ठभूमिसमेत जाँच हुँदैन ।उनले आफूलाई को’रोना आउनसक्छ भनेर घरबाट निकालिएको बताएका छन् । अमेरिकामा यसरीले कसैलाई घरबाट निकाल्न पाईदैन । कसैले त्यस्तो गरेमा ३११ व ९११ मा फोन गरेर जानकारी दिनसकिन्छ । अमेरिकामा को’रोना प्रभावित नेपालीहरुलाई विभिन्न सामाजिक नेपाली सं’घ सं’स्थाहरुले सहयोग गरिरहेका छन् । भिडियोमा भनिएजस्तो सास फेरेपछि को’रोना स’र्छ भनेर नेपालीहरु भाग्ने गरेको सत्य होइन ।कुनै नेपालीलाई स’मस्या परेमा उनीहरुले दूतावास वा कन्सुलेटमा सम्पर्क गर्न सक्छन् ।
वा सधि उनीहरुले सामाजिक सं’घसंस्थासँग समन्वय गरेर सहयोग गरिरहेका छन् । वा सिधै सं’घसंस्थाहरुलाई पनि सम्पर्क गर्न सक्छन् । त्यसका लागि दूतावास र क’न्सुलेटका ४ वटा फोनलाईन २४ सै घण्टा खुल्ला रहेका छन् ।भिडियोमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकता हुने र त्यसपछि फे’लोनी लागेका फ’टाहा अ’पराधीलाई दोश्रो प्राथमिकता बताएको ती युवाले उल्लेख गरेका छन् । जुन सत्य होइन । कसैलाई स’मस्या परेको छ भने आफ्नो देश फर्के हुन्छ भनेर ट्रम्पले बताएको उनले भिडियोमा उल्लेख गरेका छन् ।जुन कुरा सत्य होइन ।
अमेरिकी सरकारले प्रदान गर्ने राहत रकम ट्या’क्स फाइल गरेको र आ’वासीय व्यक्तिको परिभाषाभित्र पर्ने जुनसुकै स्टाटसको व्यक्तिले प्राप्त गर्छ ।उनले को’रोना संक्रमणबाट ज्यान गु’माएका व्यक्तिलाई प्लास्टिकमा पो’को पारेर लगेर खाल्डोमा हा’लेर डोजरले खनेर पु’रिरहेको बताएका छन् । जुन भनाई शतप्रतिशत झुठ र भ्रा’मक रहेको छ ।